Xiaomi သည်အိန္ဒိယရှိ Samsung ရောင်းချမှုထက် Samsung ကိုကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သည် Androidsis
Xiaomi ၏နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့မှုကိုမတားဆီးနိုင်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အောင်မြင်မှုများစွာဖြင့်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်စျေးကွက်သစ်သို့ရောက်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်နှစ်များကထက်ပိုမိုရောင်းခဲ့သည့်အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ အလွန်, အချို့စျေးကွက်များတွင် Samsung ကဲ့သို့သောစွမ်းအားမြင့်အမှတ်တံဆိပ်ထက်သာလွန်သည်.
အိန္ဒိယသည်စီးပွားရေးအရအရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်နေသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိုဘိုင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ကြီးမားသောစိတ်ဝင်စားမှုဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အထူးသဖြင့်အနိမ့်နှင့်အလယ်ပိုင်းအကွာအဝေး၌တည်၏။ Xiaomi သည်ဤစျေးကွက်တွင်အမြဲတမ်းနေရာများစွာရှိသည်၎င်း၏ရောင်းအားတွင်သရုပ်ပြခဲ့သည်တစ်ခုခု။
တရုတ်တံဆိပ်အတွက် အိန္ဒိယသည်ဒုတိယအကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်တိုင်းပြည်အတွင်းလူကြိုက်များမှုများစွာကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကခံစားခဲ့ရသည်။ တကယ်တော့၎င်း၏မော်ဒယ်များအချို့စံချိန်တင်အချိန်အတွက်သန်းပေါင်းများစွာယူနစ်ရောင်းချခဲ့ကြသည်။ အချို့သောကြီးကျယ်သောရောင်းအားကိန်းဂဏန်းများကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်မှာသေချာသည်.
Xiaomi သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဖုန်းရောင်းချမှုတွင် Samsung ကိုကျော်တက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောခဏဖြစ်သည်။ သူတို့အောင်မြင်ပါပြီကတည်းက အဆိုပါအငြင်းပွားဖွယ်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြုတ်ချ ဤကဲ့သို့သောသော့ချက်တိုင်းပြည်အတွက်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီစျေးကွက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အားထုတ်မှုဟာရောင်းအားကိုထင်ဟပ်တယ်။
2017 ၏နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင် Xiaomi ၏အိန္ဒိယတွင်ရောင်းအားမှာ ၈.၄ သန်းရှိသည်။ ကိန်းဂဏန်းများထက် ၁.၁ သန်းပိုမိုသောကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ရောင်းအား ၇.၃ သန်းနှင့်ကျန်နေသော Samsung။ ဤနည်းအားဖြင့်ဤရောင်းအားများကြောင့်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်တိုင်းပြည်အတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်လုံးလုံးလျားလျား ဦး ဆောင်သူအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့perfectlyုံအလုပ်လုပ်ဘယ်လိုကြည့်ရှုကတည်းက။ သို့သော်၎င်းသည်စျေးကွက်အတွင်းရှိကျန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်လည်းသတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Xiaomi ရောက်ရှိလာသည့်စွမ်းအားကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရပြီးကတည်းက ဒါကြောင့်သူတို့ကဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကစျေးကွက်များထပ်မံသိမ်းချင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Samsung ထက်ဖုန်းများပိုမိုရောင်းချပြီးဖြစ်သည်
Google Files Go ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအင်္ဂါရပ်အသစ် ၃ ခုကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်